कलाकारिताभन्दा कडा राहतकारिता ! – कोरोना कथा २०७६ « Gajureal
कलाकारिताभन्दा कडा राहतकारिता ! – कोरोना कथा २०७६
प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०७६, बिहीबार १७:४३
-दीपक आचार्य ‘काकु’
( कलाकार / निर्देशक )
लक डाउन को १२ औं दिनपछि आफुले जम्मा गरेको खानेकुरा सकिएछ । आफु बस्ने नजिकैको एउटा खाद्यान्न पसल खुलेको थाहा भयो । त्यहींबाट केही खानेकुरा किनेर फर्कँदै थिएँ । बाटोमा एकजना बृद्ध भेटिए जो लौरो टेकेर उभिई रहेका थिए ।
उनि निकै आशावादी अनुहारले यताउता हेर्दै थिए । मलाई कौतुहुलता जाग्यो । नजिकै गएर सोधेँ- ‘बुबा, लक डाउनमा यसरी बाहिर बस्न मिल्दैन नि ! कसैलाई पर्खनु भएको कि केही खोज्नु भएको ?’ मेरो सम्मानपुर्ण उत्सुकताले उनको मुहारमा केही भरोषाको भाव छल्कियो । नजिकै आएर मलाई प्रतिप्रश्न गरे- ‘बाबु, यो फेसबुक भन्ने ठाउँ कहाँ छ ?’
प्रश्न अनौठो लाग्यो । मैले जानेको जवाफ फर्काएँ- ‘फेसबुक त सबैको हात-हातमा छ बुबा । तर किन सोध्नु भएको ?’ उहाँ अलि अलमलिनु भयो । त्यसपछी आफ्नो कुरा शुरु गर्नु भयो – ‘खै बाबू, केही खान नपाएको ४ दिन भयो । धेरै आउँछन्, राहत दिने कुरो गर्छन् । मेरो अनुहार नियाल्छन् । अनि भन्छन्- ‘तपाईंले त राहत पाईसक्नु भयो, हामीले फेसबुकमा देखेको ! तर त्यो फेसबुकले मलाई दिएको छैन । त्यसलाई भेटेर मेरो राहत लिन पर्ने । कहिँ भेटिनँ बाबू ।’
म अलिक असमन्जस्यमा परेँ । आफ्नो मोबाइल निकालेर फेसबुकको बारेमा बताउन पर्‍यो भनेर फेसबुक खोलेँ । नभन्दै फेसबुकको भित्ताभरी उनैले राहत लिँदै गरेको फोटो छाएको रहेछ । मैले फोटो देखाउँदै सम्झाउने कोशीस गरेँ – ‘बुवा, यी हेर्नुस् त, तपाईंले राहत लिएको फोटो छ त यहाँ !’
बुबाले आफ्नो धमिलो दृष्‍टिले नियालेर आफ्नै फोटो हेरे । केही सम्झिए । अनि फोटोको कथा सुनाउन शुरु गरे – ‘बाबु, अस्तीको दिन एकहुल युवाहरु आएका थिए । सबैले पालैपालो मलाई केही सामान समाउन लगाए । फोटो खिचे । अनी, अरुसँग पनि फोटो खिच्नुछ भनेर हिँडे । उनीहरु फ़र्किएपछि मैले खोलेर हेरें, एउटा चाउचाउ र बिस्कुट थियो, त्यहीं खाएँ । सकियो । बाबु, फेसबुकमा भएको मेरो राहतचाहिँ भेट्टाई देउ न । चारदिन भयो भोकै भएको !’
बृद्धको कुरा सुनेर म निकै भावुक हुनपुगेँ । अनि आफुले किनेर ल्याएको आधा सामान दिने निर्णय गर्दै भनेँ- ‘बुवा, त्यो फेसबुकमा दिएको मैले किनेर ल्याएको सामान छ, आधा तपाईं लिनुस् ।’ मेरो कुरा सुनेर फेरी अप्ठेरो मान्दै शर्त तेर्स्याए -‘फोटो न खिच्ने भएमात्र सामान लिन्छु है बाबु ।’
मैले फोटो नखिची केही सामान उनको हातमा थमाई दिएँ । अनि बाटो लागेँ । बृद्ध अझै त्यो फेसबुक कहाँ छ भनेर पर्खी रहेका थिए । फर्कँदै गर्दा मेरो मन मा एउटा प्रश्न खेली रह्यो -‘के फोटो न खिची राहत दिन मिल्दैन ?’ जुन प्रश्न अहिलेपनी अफुले आफैंलाई सोधी रहेको छु – ‘सेवाको पनि यस्तो निकृष्ट प्रचार हुन्छ र ?’
राप्रपा राजनिती : कमल थापा- ‘हाहाहा, नो कमेन्ट !’, रेखा थापा- ‘हिहिहि, भो कमेन्ट !’
‘शिक्षकले पढाउने कर्तव्य छोडेर राजनीति मात्रै गर्न हुँदैन’ : केपी ओलीविद्यार्थीहरु जति सब राजनीतिमा लागेपछि
राप्रपा महाधिवेशनमा कम्युनिष्ट नेताको लर्को, कारण त्यही हो कि अर्को ?
सिंहदरबारमा गोली चल्दा असईलाई नसियत, टिकटक बनाउने पीएसओ पनि कारबाहीमाअब सरकारले नै टिकटककोलागी भनेर ‘प्रप
व्यसन, अधिवेशन, महाधिवेशन र दुर्व्यशन !
अध्यक्षको शपथ ग्रहणपछि ओलीले भने – ‘हाम्रो पार्टीलाई बाह्य र आन्तरिक हमला भइरहेको छ’बाह्य हमलाको
महाआँधिवेशनमा दुर्गा प्रसाईंको सुनामी : न बन्द न सत्र, अलपत्र !
बन्दसत्र स्थलमा पुगे ओली, भीम रावलविरुद्ध कार्यकर्ताको नाराबाजीएमाले, जसको अर्को नाम हो – ओलीबाद !
काठमाण्डौमा सुरक्षित श:शुल्क पार्किङ्ग : टुटफुट भएमा वा हराएमा जिम्मेवार…
राप्रपा महाधिवेशनमा कम्युनिष्ट नेताको लर्को, कारण त्यही हो कि अर्को…
महाआँधिवेशनमा दुर्गा प्रसाईंको सुनामी : न बन्द न सत्र, अलपत्र…